एमसीसीले राजनीति तातिरहेकै बेला देउवा नै झस्किनेगरी बाहिरियो देउवाकै ज्योतिषिको यस्तो भविष्यवाणी ! - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
एमसीसीले राजनीति तातिरहेकै बेला देउवा नै झस्किनेगरी बाहिरियो देउवाकै ज्योतिषिको यस्तो भविष्यवाणी !
शेरबहादुर देउवालाई ७ पटकसम्म प्रधानमन्त्री हुने योग परेको भन्ने ज्योतिषले गरेको अर्को भविष्यवाणी सार्वजनिक भएको छ । उनले अझै ४ महिना देश कठिनपूर्ण यात्रामा जाने बताएका छन्। उनले असार २६ गतेसम्म रहेको छत्रभंग योगका कारण यो परिवर्तन भएको बताए। उनको भविष्यवाणीपछि बालुवाटारमा समेत खैलाबैला मच्चिएको छ ।
गत फागुमा नै मैले भनेको थिएँ, असार २६ पहिला परिवर्तन हुँदैन भनेर।’ उनले भने, ‘किन भने चैत्र २१ गतेदेखि असार २६ गतेसम्म छत्रभंग योग थियो। त्यो बेलामा राजनीतिको शिर्ष स्थानमा रहेकाहरुले आसन छोड्नु पर्ने, प्रतिनिधिसभा जस्ता राजनीतिक सर्वोच्च संस्थाहरु विघटन हुनु पर्ने नै थियो।’
नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका शेरबहादुर देउवा हालसम्म ४ पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्। सर्वोच्चको परमादेश अनुसार शेरबहादुर देउवा ५औँ पटक प्रधानमन्त्री बन्दैछन्।